InstaZoom -Yandisa umfanekiso weprofayile ye-Instagram kwi-HD epheleleyo
isaziso: Undefined index: supperman in / ikhaya /instazoom.mobi/public_html/wp-content/themes/instazoom v2/header.php kumgca 93
InstaZOOM -Yandisa umfanekiso weprofayile ye-Instagram
Jonga kwaye ukhuphele imifanekiso yeprofayile ye-Instagram kowona mgangatho uphezulu weHD.
Khuphela i-Insta DP kunye nokunye
Sebenzisa izixhobo zethu zokukhuphela ze-Instagram ukugcina elona xesha lilungileyo kwisixhobo sakho ngonaphakade
I-Instagram liqonga leendaba zoluntu elinabasebenzisi abasebenzayo abangaphezu kwezigidi ezingama-600. Instazoom ngumbukeli wokuqala we-Instagram wehlabathi okuvumela ukuba ujonge imifanekiso yeprofayile epheleleyo, uyikhuphele, kunye nokunye. Instazoom yinkonzo ekwi-intanethi ebonisa zonke ifoto kuzo zonke iakhawunti yomsebenzisi ngefomathi enkulu ngaphandle kokushiya ifestile yesikhangeli sakho.
Imida ekuJongweni Instadp
Instadp kudala ikhona kwaye ayizukuhamba nakwixesha elizayo. Kodwa kuthekani ukuba ufuna ukubona umfanekiso weprofayile yomntu kwimboniselo epheleleyo? I-Instagram iyalunciphisa olu khetho, nangona kunjalo Instazoom hayi! Insta yandisa ibonelela ngenye indlela yokujonga okuthintelweyo kwi-Instagram, ikuvumela ukuba usondeze iprofayile ye-Instagram yabasebenzisi obathandayo ngaphandle kwemida okanye imida. Instazoom ikunika ukufikelela kuyo yonke imiba ye Instadp-Iakhawunti yomntu.
usetyenziso lwe Instazoom ebomini?
Ukuchonga abantu kwiifoto: Iifoto zeprofayile ze-Instagram azinasombululo esisezantsi, nto leyo enokwenza kube nzima ukubona abantu abakwimifanekiso. nge Instazoom ungabona umfanekiso weprofayile ye-Instagram isondeziwe kwaye ikwisisombululo esiphezulu, isenza kube lula ukuchonga abahlobo kunye nosapho lwabo.
Unokwazi ukuba umfanekiso weprofayile uyinyani ngokuwuthelekisa nefoto echanekileyo yomnye umntu.
Khuphela ifoto yeprofayile yakho entsha kwaye uyincamathisele kwisixhobo sakho sobuqu: unokukhuphela umfanekiso kwaye uwugcine kwigalari yakho ukuze ujongwe kamva, okanye uwusebenzise njengephepha lodonga kwifowuni yakho okanye ikhompyuter.
Ngaba ukhe wafumana izicelo ezingaqhelekanga kwi-Instagram ezivela kubantu ongabazi ngokupheleleyo? Ngaphambi kokuba wenze isigqibo, cinga ukuba yenziwa ngeenjongo ezilungileyo okanye ezimbi.
Ukusetyenziswa okungenamkhawulo - Instazoom ingasetyenziselwa izinto ezahlukeneyo.
Isebenza njani Instazoom?
Instazoom ixhomekeke kwigama leprofayile yakho okanye i-url yeprofayile yoluntu okanye umntu okwi-Instagram ngeefoto. Instazoom Yandisa imifanekiso ye-Instagram ukuvelisa imifanekiso esemgangathweni.
Nge-Insta Zoom, unokusondeza ngokukhawuleza kwiProfayili ye-Insta kwaye ulayishe imifanekiso yeprofayile yabanye abasebenzisi be-Instagram. I-Insta Zoom ikunceda ukuba uqhubekisele phambili umfanekiso wakho weprofayile ye-Insta kumgangatho weHD.
Ungawandisa njani okanye ukhuphele njani umfanekiso weprofayile ye-Instagram nge Instazoom?
Inyathelo 1: Ndwendwela iphepha lethu lasekhaya ku: www.instazoom.mobi
Inyathelo 2: Ngenisa i-url ye-Instagram okanye igama lomsebenzisi kwibhokisi yokukhangela kwiwebhusayithi emva koko ucofe iqhosha "I-ZOOM".
Inyathelo 3: Xa iziphumo ziphuma, unokucofa iqhosha lokujonga kwindawo yogcino-zilwanyana ukuze ubone umfanekiso weprofayile ye-Instagram osondeziweyo omkhulu kowona mgangatho ubalaseleyo.
Inyathelo 4: Cofa iqhosha lokukhuphela ukukhuphela umfanekiso wakho weprofayile kowona mgangatho uphezulu.
Ngaba Instazoom esemthethweni?
Instazoom kusemthethweni ngokupheleleyo njengoko iinkangeleko Instagram kwabelwana esidlangalaleni. Instazoom- Ke abasebenzisi basemthethweni ngokupheleleyo.
Ngaba Instazoom isoftware?
Ayiyi! Instazoom yiwebhusayithi ekuvumela ukuba ujonge kwaye ukhuphele eyona mifanekiso ilungileyo yeprofayile ye-Instagram.
Ndiwukhuphela njani umfanekiso weprofayile ye-Instagram kwikhompyuter?
Instazoom isebenza ngokugqibeleleyo kuso nasiphi na isixhobo. Unga www.Instazoom.Mobi ndwendwela ukukhuphela owona mfanekiso weprofayile we-Instagram kwiPC yakho.
Yintoni iprofayile ye-Instagram yokwandisa umfanekiso-zoom ye-insta?
Le yindlela esebenza ngayo Instazoom ngokusisiseko. Ngokwesiqhelo, i-Instagram ayikuvumeli ukuba ubonise eyona mifanekiso isemgangathweni yeprofayile. Instazoom yenzelwe ukukhulisa nokuhlaziya eyona mifanekiso ilungileyo yeprofayile ye-Instagram ukuze ijongwe kwaye ikhutshelwe.
Ngaba ndingajonga iiakhawunti ngokungaziwa ngenxa yoko?
Ayiyi! Sivumela abasebenzisi ukuba basebenzise kuphela Instazoom ngeeakhawunti zikawonke-wonke ze-Instagram.
Ngaba Instazoom simahla?
Instazoom simahla ngokupheleleyo. Asihlawulisi nayiphi na imali eyongezelelweyo. Nawe unako Instazoom ukusebenzisa ngoxolo olupheleleyo lwengqondo.
Enye indlela kwi-iZoomYou?
uninzi lwe-iZoomYou kwimarike azisasebenzi okanye azinzanga, umgangatho ophantsi xa ukhuphela imifanekiso. InstaZoom Ke yeyona ndlela ilungileyo ye-iZoomYou yokujonga ulwazi kwaye ukhuphele imifanekiso yeprofayile ye-Instagram ngowona mgangatho ubalaseleyo.
Enye indlela ye-Izuum?
Iwebhusayithi ye-Izuum DB ayisasebenzi. Instazoom ngoko esona sixhobo silungileyo sokutshintsha i-Izuum yokwandisa umfanekiso weprofayile ye-Instagram ngowona mgangatho uphezulu.
I Hat Instazoom ulwandiso?
Ewe ungayifumana Instazoom-Ulwandiso kwivenkile ezongezelelweyo ze chrome-Kwaye Firefox-Izikhangeli.
Ingaba isebenza kanjani Instazoom-Ukwandiswa?
Unokubukela isifundo sevidiyo esingezantsi malunga nendlela yokusebenzisa i Instazoom-Jonga ukongezwa: